योग गर्ने कि जिम जाने, कुन राम्रो? - Dainik Online Dainik Online
योग गर्ने कि जिम जाने, कुन राम्रो?
प्रकाशित मिति : १७ कार्तिक २०७८, बुधबार ६ : ५८
मानिसको मांसपेशी–प्रणाली असाधारण छ। हाम्रा मांसपेशीहरूले अद्भुत काम गर्न सक्छन्। मांसपेशीहरूले काम गर्ने क्षमतालाई बढाउन तिनलाई बलियो एवं एकदमै लचिलो राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईंले भारी तौल उचाल्ने व्यायाम गर्नुभयो भने, तपाईंका मांसपेशीहरू ठूला देखिन्छन्, तर तिनमा लचिलोपन हुँदैन। तपाईंले ठूला–ठूला मांसपेशीका गाँठागुँठी भएका मानिसहरूलाई ध्यान दिन सक्नुहुन्छ, उनीहरू राम्रोसँग नमस्कार गर्न सक्दैनन्! उनीहरू निहुरिन समेत सक्दैनन् ।
योग– यो व्यायाम होइन!
योग भनेको व्यायाम होइन । यसका अन्य धेरै आयामहरू छन् । योगलाई कुनै व्यायाम वा कसरतको रूपमा सीमित गर्नु गम्भीर अपराध हुनेछ । तर, हामी सरल अभ्यास गर्न सक्छौँ, जसलाई उप(योग भनिन्छ । यिनमा कुनै आध्यात्मिक आयाम जोडिएको हुँदैन । यदि तपाईंले उप-योग वा अङ्गमर्दन अभ्यास गर्नुभयो भने, निश्चय पनि तपाईं शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त रहनुहुन्छ । साथै, तपाईंलाई कुनै उपकरण पनि चाहिँदैन-भुइँमा ६ ह ६ फूटको खाली स्थान भए पुग्छ ।
तपाईं पूर्ण रूपमा तन्दुरुस्त रहनुहुनेछ, अनि तपाईं आफ्नो मांसपेशी र अरू कुराहरूलाई सुदृढ बनाउन सक्नुहुन्छ । अङ्गमर्दन र उप(योगका सम्पूर्ण अभ्यासहरूमा तपाईंको आफ्नै शरीरको तौल प्रयोग गरिन्छ । तब, तपाईंले आफ्नो वरपर जिम छैन भनेर बहाना गर्न पाउनुहुन्न । तपाईं जहाँसुकै भएपनि यो अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईंसँग आफ्नो शरीर छ ! शरीरलाई सुदृढ बनाउनको लागि जिममा तौल उठाउने अभ्यासहरूको तुलनामा यी अभ्यासहरू त्यति नै प्रभावकारी छन् ।
यसले तपाईंलाई समझदार व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत त गर्छ नै, साथै तपाईंको शारीरिक प्रणालीमा कुनै अनावश्यक तनाव सृजना नगरिकन तपाईंलाई धेरै बलियो पनि बनाउँछ । अनि, यो चाहिँ पक्का छ कि तपाईं थुपारिएको मासुको डल्लो जस्तो देखिनुहुन्न । थुप्रै मानिसहरू थुपारिएको त्यस्तै बनेका छन् । उनीहरू आफूलाई तन्दुरुस्त ठान्छन्, तर मलाई लाग्छ कि उनीहरू अरट्ठ परेका छन्! तपाईंको शारीरिक प्रणालीले उचित रूपमा काम गर्नको लागि मांसपेशीको थुप्रो र तागत भन्दा पनि तपाईंको शरीरमा लचिलोपन हुनु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
योगमा, हामी मांसपेशीहरूको शक्तिलाई मात्र महत्त्व दिँदैनौँ । शरीरका प्रत्येक अङ्गहरू स्वस्थ हुनु पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ । योग पद्धतिमा शरीरका अङ्गहरूलाई स्वस्थ राख्नको लागि विशेष ध्यान दिइन्छ । भलै, तपाईले ठूल्ठूला मांसपेशी बनाउनुभयो भनेपनि, यदि तपाईंको कलेजोले राम्रोसँग काम गरीरहेको छैन भने, त्यो मांसपेशीको के काम? शरीर लचिलो र प्रयोग गर्न सकिने हुनु असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ । शरीरका अङ्गहरू आरामदायी स्थितिमा हुनु अपरिहार्य छ ।
तपाईंभित्र भौतिकभन्दा परको आयाम उजागर भयो भनेमात्र, अस्तित्व बिस्तारै तपाईंसामु लाखौँ रूपहरूमा प्रकट हुन्छ । जुन चिजहरू अस्तित्वमा छन् भनेर तपाईंले कहिल्यै कल्पना समेत गर्नुभएको छैन, ती तपाईंको निम्ति वास्तविक बन्दछन्, किनकि भौतिकभन्दा परको आयाम जीवन्त बनेको हुन्छ।